आउँदै गरेको महान राजा : सयौं वर्ष अघि नामाकरण गरिएको - सत्य वेद पुुस्तकहरू
विष्णु पुराणले राजा भेनाको बारेमा बताउँछ । यद्यपि भेना एक राम्रो राजाको रूपमा शुरू भए पनि भ्रष्ट प्रभावका कारण उनी यति खराब भए कि उनले बलिहरू र प्रार्थनाहरूलाई अमान्य तुल्याइदिए । उनले आफू पनि विष्णुभन्दा माथि रहेको दाबी गरे । ऋषि मुनिहरु र ब्राह्मण / पुजारीहरूले उनीसँग तर्क गर्न खोजे , राजाको हैसियतमा उनले धर्मको सिकाउनु पर्दछ र उचित धर्मको लागि उदाहरण बसाल्नु पर्छ, यसलाई नाश होइन । तर भेनाले सुन्न अस्वीकार गरे । त्यसकारण हतास भएका पुजारीहरूले धर्म पुर्नस्थापना गर्न र उनलाई पश्चाताप गर्न मनाउन सकेनन, त्यसैले उनी भएको दुष्टको राज्यलाई हटाउनका निम्ति उनको हत्या गरे ।
यसले देश शासकविनाको राज्य भयो । यसैले पुजारीहरूले राजाको दाहिने हातमा रगडे ( मालिस गरे ) र पृथु / प्रुथु भन्ने नामको एक महान व्यक्ति प्रकट भए । पृथुलाई भेनाको उत्तराधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। सबै नै खुशी थिए कि त्यस्तो नैतिक व्यक्ति राजा बन्नु पर्छ र ब्रह्मा पनि पृथुको राज्याभिषेक समारोहमा उपस्थित भए । पृथुको शासनकालमा राज्यले सुनौलो युग प्रवेश गर्‍यो ।
यसले हिब्रू ऋषि यशैया र यर्मियाले सामना गरेको यस्तै दुविधाको उदाहरण दिन्छ । उनीहरूले इस्राएलका राजाहरूलाई शुरुमा महान र दश आज्ञाको धर्म अनुसरण गर्दै , भ्रष्ट भएको देखेका थिए । उनीहरूले भविष्यवाणी गरे कि रूख ढालेझैं , वंशको पतन हुनेछ । तर उनीहरूले भावी महान राजाको बारेमा पनि अगमवाणी गरे, यो एउटा यस्तो हाँगा थियो जुन खसेको रूखको हाँगाबाट माथि आउनेछ ।
भेनाको कथाले पुजारीहरू र राजाहरू बिचको भूमिकाको स्पष्ट फरक चित्रण गर्दछ । राजा भेनालाई पुजारीहरूले हटाउँदा उनीहरूले शासन गर्न सक्दैनथे किनकि यो उनीहरूको अधिकार थिएन । यशैया र यर्मियाको समयमा पनि राजा र पुजारीको बिचको भूमिकाको भिन्नता लागू भयो । यी कथाहरूको भिन्नता यो हो भने पृथुको जन्म पछि उनको नाम दिइएको थियो , जबकि हामी कि हामी हेर्ने छौ कि कसरी हिब्रू ऋषिहरूले कसरि जन्म भन्दा सयौं वर्ष अघि आउने महान राजाको नाम राखेका थिए ।
यशैयाले आउनु हुने शाखा को बारेमा सबै भन्दा पहिला लेखेका थिए। दाऊदको खत्म भइसकेको राजवंशमा एउटा आउनु हुने ‘पुरूष’ सँग बुद्धि र सामर्थ्य हुनेछ। यर्मियाले यसको आगाडी यो भने कि यो शाखा लाई परमेश्वर – को नाउँले चिन्ने छन् जो कि सृष्टिकर्ताको लागि यहूदिहरुद्वारा उपयोग गरिने नाउँ र यही हाम्रो धार्मिकता हुनेछ।
जकरियाले शाखा को विषयलाई अगाडी बढाउदै
जकरिया मन्दिरको पुर्ननिर्माणको लागि बेबीलोनको दासत्व बाट फर्के
ऋषि – भविष्यद्वक्ता जकरिया 520 ईसा पूर्वमा रहे, जब यहूदी उनीहरुको पहिलो दासत्वबाट यरूशलेम तर्फ फर्किन थाले। उनीहरु फर्के पश्चात, यहूदीहरुले उनीहरुद्वारा नष्ट गरिदिएको मन्दिरलाई पुर्ननिर्माण गर्न आरम्भ गरे। यसका महायाजक यहोशू थिए, र त्यो मन्दिरमा याजकीय सेवकाईको पुन: आरम्भ गरि रहेको थियो। ऋषि – भविष्यद्वक्ता जकरिया, ले आफ्नो साथी यहोशू, महायाजक साथ मिलेर, यहूदीहरुलाई फर्किनुमा अगुवाई प्रदान गरेका थिए। यहाँ परमेश्वरले- जकरियाद्वारा– यहोशूको बारेमा भनिएको कुराहरु, यहाँ तल दिइएको छ:
“परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो …सुन र चाँदी लिएर एउटा मुकुट बना, र त्‍यो यहोसादाकको छोरो प्रधान पूजाहारी यहोशूको शिरमा लगाइदे। त्‍यसलाई भन्, ‘सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: हेर, यो मानिस जसको नाउँ हाँगो हो, त्‍यो आफ्‍नो ठाउँमा बढ्‌नेछ, र परमप्रभुको मन्‍दिर बनाउनेछ …र आफ्‍नो सिंहासनमा विराजमान भएर राज्‍य गर्नेछ, र त्‍यो सिंहासनमा एक जना पूजाहारी हुनेछ। अनि दुवैको बीचमा मिलाप हुनेछ’।” (जकरिया 6:9-13)
शाखा! 200 वर्ष पहिले यशैयाद्वारा आरम्भ गरिएको थियो, यर्मियाद्वारा 60 वर्ष पहिले वृद्धि भएको विषयमा, जकरियाद्वारा यसलाई अझै अगाडी ‘शाख’ को रूपमा विस्तारित गरीएको छ, यद्यपि, यस राजवंशलाई समाप्त गरिदिएको थियो। एउटा बर को वृक्ष जस्तै, यो शाखा यसको एउटा मृत जराबाट पुन: जीवित भई अगाडी बढ्दै जान्छ। यस शाखा लाई अब ‘मेरो सेवक’ – परमेश्वरको सेवक भनि पुकारिएको छ। कुनै प्रकारले 520 ईसा पूर्वमा यरूशलेममा बस्ने जकरियाको सहकर्मी यहोशू महायाजक, आउने वाला शाखा को प्रतीक थिए। तर कसरी? यसमा भनिएको छ कि ‘एकै दिन’ मा परमेश्वरद्वारा अधर्मलाई हटाइने छ। यो कसरी घटित हुनेछ?
शाखा : याजक र राजालाई एकतामा ल्याउदै
जकरियाले केहि समय पछि यो वर्णन गर्छन। यसलाई बुझ्नको लागि हामीले याजक र राजाको भूमिकाहरुलाई बुझ्न आवश्यक छ, जुन कि पुरानो करारमा निकै कठोरता साथ एक अर्का सँग पृथक थिए। कुनैपनि राजा याजक हुन् सक्दैन थिए र कोई पनि याजक राजा बन्न सक्दैन थिए। याजकको भूमिका परमेश्वर र मानिस मध्यमा पापहरुको प्रयाश्चितको लागि अर्पित गरिने भेंट बलिदानहरुको मध्यस्थताको कार्य गर्नु थियो, र राजाहरुको उत्तरदायित्व आफ्नो सिंहासन देखि धार्मिकता साथ राज्य गर्नु थियो। दुवै नै महत्वपूर्ण थिए; तर दुवै नै एक अर्का बाट भिन्न थिए। तर, जकरियाले लेखे कि भविष्यमा:
‘परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो: “….सुन र चाँदी लिएर एउटा मुकुट बना, र त्‍यो यहोसादाकको छोरो प्रधान पूजाहारी यहोशूको शिरमा लगाइदे। त्‍यसलाई भन्, ‘सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘हेर, यो मानिस जसको नाउँ हाँगो हो, त्‍यो आफ्‍नो ठाउँमा बढ्‌नेछ, र परमप्रभुको मन्‍दिर बनाउनेछ। त्‍यसले नै परमप्रभुको मन्‍दिर बनाउनेछ…र आफ्‍नो सिंहासनमा विराजमान भएर राज्‍य गर्नेछ, र त्‍यो सिंहासनमा एक जना पूजाहारी हुनेछ। अनि दुवैको बीचमा मिलाप हुनेछ’।” (जकरिया 6:9-13)
यहाँ निर, पूर्व उदाहरणको विरूद्ध, जकरियाको दिनहरुमा (यहोशू) महायाजकको सिरमा शाखा लाई चिन्ह स्वरूप राजाको मुकुटको रूपमा धारण गर्न पर्ने थिए। (स्मरण राखौं कि यहोशू ‘आउने कुराहरुको प्रतीकात्मक’ थिए)। महायाजक, यहोशू एउटा राजकीय मुकुटलाई एकै व्यक्तिमा राजा र याजकलाई एकीकृत गर्दै धारण गरि रहेका थिए – जुन याजकको सिंहासनमाथि विराजमान हुनु थियो। यसको अतिरिक्त, जकरियाले लेखे ‘यहोशू’ नै त्यस शाखा को नाउँ थिए। यसको अर्थ के हो?
‘यहोशू’ र ‘येशू’ नाउँ
यसलाई बुझ्नको लागि हामीलाई पुरानो करारको अनुवादको इतिहासको समीक्षा गर्न आवश्यक छ। हिब्रू भाषाको मूल पुरानो करार 250 ईसा पूर्व मा ग्रीक भाषामा अनुवादित भएको थियो, यसलाई हामीले सेप्तुआजिन्त अर्थात् सप्तति अनुवादको नाउँ देखि चिनिन्छ। अहिले पनि यो व्यापक रूपमा उपयोग हुन्छ, हामीले देखेका छौँ कि कसरी ‘ख्रीष्ट‘ ले सबै भन्दा पहिला सेप्तुआजिन्तको उपयोग गर्नु भयो र यहाँ निर हामीले ‘यहोशू’ को लागि त्यही विशलेषणको उपयोग गर्ने छौँ
‘यहोशू’= ‘येशू’ दुवै नै हिब्रू ‘यहोशुआ’ नाउँ देखि आएको हो।
जस्तै कि तपाईले चित्रमा देख्न सक्नु हुन्छ, यहोशू को मूल हिब्रू नाउँ ‘यहोशुआ’ को अंग्रेजी लिप्यंतरण हो। वृत्त-खण्ड # 1 बाट यो थाहा पाउन सकिन्छ कि कसरी 520 ईसा पूर्वमा जकरिया ले ‘यहोशू’ लाई हिब्रू भाषामा लेखेका थिए । यो अंग्रेजीमा ‘यहोशू’ को नाउँदेखि लिप्यंतरित भएको हो (# 1 => # 3)। हिब्रु भाषा को ‘यहोशुआ’ अंग्रेजी भाषामा यहोशू नै हो । जब सेप्तुआजिन्त को अनुवाद 250 ईसा पूर्वमा हिब्रू भाषा देखि ग्रीक भाषामा भयो, तब यहोशुआ लाई ईसोऊस मा लिप्यंतरण (#1 => #2) गरिएको थियो। हिब्रू भाषाको ‘यहोशुआ’ ग्रीकमा ईसोऊस नै हो। जब ग्रीकको अनुवाद अंग्रजी भाषामा गरिएको थियो, तब ईसोऊसको लिप्यंतरण ‘ज़ीजस’ अर्थात् येशू (#2 => #3)मा गरिएको थियो। ग्रीक भाषाको ईसोऊस अंग्रेजी भाषामा येशू नै हो ।
जब हिब्रू भाषामा पुकारने गर्द थिए, तब येशू लाई यहोशुआ भनि पुकारने गर्द थिए,तर ग्रीकको नयाँ करारमा उहाँको नाउँलाई ‘ईसोऊस’ भनेर लेखियो – सठीकता साथ त्यस्तै गरी जसरी ग्रीकको सेप्तुआजिन्त ले यस नाउँलाई लेखेका थिए। जब नयाँ करारलाई ग्रीक देखि अंग्रेजी भाषामा अनुवादित गरियो (#2 => #3) तब ‘ईसोऊस’ ‘येशू’को नाउँ एउटा परिचित लिप्यंतरण थियो। यसरी, ‘येशू’ को नाउँ= ‘यहोशू’, को साथ एउटा मध्यवर्ती ग्रीक अवस्था देखि ‘येशू’ को साथ, र ‘यहोशू’ को साथ हिब्रू भाषा देखि सिधै आएको हो । दुवै नै नासरतको येशू र 520 ईसा पूर्व को यहोशू महायाजक एकै नै व्यक्तिको नाउँ हो, जसलाई उनको मूल हिब्रू भाषामा ‘यहोशुआ’ भनि बोलाउने गर्द थिए । ग्रीकमा दुवैलाई ‘ईसोऊस’ भनि बोलाउने गर्द थिए। यो बरगद = बर (लिप्यंतरण) = बर = फिकस बेंगलेंसिस (यसको लैटिन मा शास्त्रीय नाम) को सदृश हो।
नासरतको येशू नै शाखा हो
अब जकरिया द्वारा गरिएको भविष्यद्वाणीले अर्थ दिन्छ। जुन भविष्यद्वाणी 520 ईसा पूर्वमा गरिएको थियो, त्यसमा आउने हुने शाखा को नाउँ येशू हुनेछ, जसले सिधा नासरत को ‘येशू’ को तर्फ संकेत गरिरहेको छ।
जकरियाको अनुसार, आउनु हुने येशू ले, राजा र याजकको भूमिकाहरुलाई एकीकृत गरि दिनु हुनेछ । यस्तो कुन कार्य थियो, जुन याजकहरुले गरेका थिए? मानिसहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै, उनीहरुको पापहरुको लागि परमेश्वरको सामु प्रयाश्चितको लागि भेट स्वरूप बलिदान चढ़ाउद थिए। बलिदानहरु द्वारा याजकहरुले मानिसहरुको पापहरुलाई ढाकी दिने गर्द थिए। यसैगरी, आउनु हुने शाखा ‘येशू’ एउटा यस्तो बलिदान को रुप मा हुनुहुन्थियो जस द्वारा यहोवा परमेश्वर ‘एकै दिनमा मानिसको अधर्मलाई हटाई दिनु हुनेछ‘ – यो त्यो दिन थियो, जुन दिन येशू ले स्वयं लाई बलिदान को रूपमा अर्पित गर्नु भएको थियो। पापहरुलाई हटाई दिनुको कारण, मृत्युको सामर्थ्यले हामी माथिको अधिकारलाई हराएको थियो।
नासरतको येशू सुसमाचारहरु भन्दा बाहिर पनि राम्रो संग ले परिचित राख्नु हुन्थियो। यहूदी ताल्मुद, जोसीफुस र इतिहासको अन्य लेखकहरुले येशूको बारेमा, चाहे उनीहरु शत्रु रहें वा मित्र, सदैव उहाँलाई ‘येशू’ वा ‘ख्रीष्टको’ को रूपमा उद्धृत गरिएको छ, यसै कारण उहाँको नाउँलाई सुसमाचारहरु द्वारा अविष्कृत गरिएको थिएन।
किनकी यिशै र दाऊद उहाँको पूर्वज हुन, त्यसैले, येशू ‘यिशै को ठूटो’ मा निक्लेर आयो। येशू सँग बुद्धि र समझ यस्तो स्तर सम्म थियो, कि जसले उहाँलाई अन्य सबैभन्दा पृथक गर्दछ। उहाँको चतुराई, शान्ति र अंतर्दृष्टि दुवै आलोचकहरु र अनुयायिहरुलाई निरन्तर प्रभावित गर्दछ। सुसमाचारहरुमा वर्णन उहाँको आश्चर्यकामको माध्यम बाट उहाँको समार्थ्यलाई नकार्न सकिदैन। कसैले पनि, उहाँ माथि विश्वास नराख्ने चुनाव राख्न सक्ने थिए; तर, कसैले पनि, उहाँलाई अनदेखा गरेनन। यशैया ले भविष्यवाणी गरे कि असाधारण बुद्धि र सामर्थ्य राख्नेको गुणवत्ता साथ येशू एक दिन यस शाखा मा आउनु हुनेछ।
अब नासरत को येशूको जीवनको बारेमा सोचौ। उहाँ निश्चित रूपले एउटा राजा हुने दावा गर्नु भयो – वास्तवमा उहाँ नै राजा हुनुहुन्छ। यही नै ‘ख्रीष्ट ‘ शब्दको अर्थ हो। तर पनि उहाँले जे यस पृथ्वीमा गर्नु भो त्यो वास्तवमा याजकीय कार्य थियो। याजकको कार्य यहूदी मानिसहरु तर्फ बाट आएको स्वीकारयोग्य भेंटको बलिदानहरुलाई अर्पित गर्नु थियो । येशूको मृत्यु यसकारणले नै महत्वपूर्ण थियो, किनकी, यो पनि परमेश्वरको सामु हाम्रो तर्फबाट अर्पण गरिएको एउटा भेंट थियो। उहाँको मृत्यु, न केवल यहूदिहरुको लागि मात्र तर अन्य कुनै व्यक्तिको पाप र आत्मग्लानिको प्रयाश्चित गर्दछ । पृथ्वीको पापको जस्तो जकरियाले भविष्यद्वाणी गरे, त्यसै अनुसार एकै दिनमा हटाईएको थियो – त्यस दिन जब उहाँ मर्नु भयो र उहाँले हाम्रो सबै पापहरुको दण्ड तिरिदिनु भयो। आफ्नो मृत्युद्वारा उहाँले एक याजकको रूपमा सबै शर्तहरुलाई पूर्ण गरिदिनु भयो, जब कि उहाँलाई धेरैजसो ‘ख्रीष्ट’ वा राजाको नाउँले चिन्न थियो। त्यस पश्चात् आफ्नो पुनरुत्थान मा, उहाँले मृत्यु माथि आफ्नो सामर्थ्य र अधिकारलाई देखाउनु भयो। उहाँले यी दुवै भूमिकाहरुलाई एकीकृत गरि दिनु भयो। शाखा, उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसलाई निकै पहिला देखि नै ‘ख्रीष्ट’, याजकीय-राजा भनि पुकारा गरिएको थियो। र यसै नाउँको भविष्यद्वाणी जकरिया द्वारा उहाँको जन्म भन्दा 500 वर्ष पहिला भइ सकेको थियो।
उहाँको दिनहरुमा, आज दिनहरु जस्तै, येशूले आलोचकहरुको सामना गर्नु पर्यो, जसले उहाँको अधिकार माथि प्रश्न गरे। उहाँको उत्तरले भविष्यद्वक्तहरुको तर्फ संकेत गर्द थियो, जो उहाँ भन्दा पहिला आएका थिए,जसले यो दावा गरेका थिए, कि उनीहरुले ऊहाँको जीवनलाई पहिला बाट नै देखिसकेका थिए। यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ, जसमा येशूले उहाँको विरोधमा हुनेहरुलाई यसरी उतर दिनु भयो:
… विषयमा गवाही दिने, ती नै धर्मशास्‍त्र हुन्.. (यूहन्‍ना 5:39)
अर्को शब्दमा, येशूले दावा गर्नु भयो कि पुरानो करारमा धेरै आघि बाट नै उहाँको जीवनको बारेमा भविष्यद्वाणी गरिएको थियो। किनकि मानवीय सहज ज्ञानले हजार वर्षको भविष्यलाई पूर्वकथित बनाउन सक्दैन, त्यसैले, येशूले भन्नुभयो कि यहि नै त्यो प्रमाण हो जसले यो पुष्टि गर्छ कि वास्तवमा उहाँ मानिस जातिको परमेश्वरको योजनाको अनुसार आउनु भएको थियो। आज पनि हाम्रो लागि यी सब कुराहरु पुष्टि गर्नको लागि पुरानो करार उपलब्ध छ।
अहिले सम्म जे पनि पुरानो करारको भविष्यद्वक्ताहरुले भनेका थिए, आउनुहोस त्यी सबैलाई सारंशित गरौं। येशूको आगमनको संकेत मानवीय इतिहासको आरम्भ मा नै दिएको थियो। तब अब्राहमले त्यस स्थानको भविष्यद्वाणी गरे कि येशूको बलिदान कहाँ निर हुनेछ, जब कि निस्तार चाडको वर्षको दिनको भविष्यद्वाणी गरे। हामीले देख्यौ कि भजनसंग्रह2एस्तो भजन हो, जसमा आउने हुने राजाको लागि ख्रीष्ट नामक पदको उपयोगको भविष्यद्वाणी गरिएको थियो। यहाँ यस लेखमा हामीले उहाँको वंशको रेखा, उहाँको याजकीय सेवकाई र उहाँको नाउँको भविष्यद्वाणीलाई देखेका छौ। के तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि इतिहासमा कोहि यस्तो अरु व्यक्ति छन, जसलाई नासरतको येशूको तुलनामा भन्दा धेरै भविष्यद्वाणी पुरानो करारमा भविष्यद्वक्ताहरुले यस्तो सूक्ष्मताले अरुको लागि गरेका छन्?
सांरश : जीवनको वृक्षलाई सबैको लागि प्रस्तावित गरिएको थियो
यो पहिलोको शाखाले कसरी र कुन कुराको भविष्यद्वाणीलाई पूरा गर्नको लागि गरिएको थियो, सावित्री र सत्यवान्को कथालाई प्रकाशित गर्द छ। शुद्ध सावित्री जस्तै, शाखा आफ्नो प्रेमीको लागि मृत्युको सामना गर्दछन। तर पतिको लागि पत्नीको प्रेमको अपेक्षा, यस शाखा सँग सामर्थी बलिदानात्मक प्रेम छ, जसले आत्मिक पत्नीलाई प्राप्त गर्दछ, जसले सदैको लागि उनलाई मृत्यु देखि बचाईराख्नेछन।
एउटा बरको रुख जस्तै अमर र निरन्तर जिउदो रहने वृक्षको चित्र, बाइबलको अन्तिम अध्यायमा पनि पाइन्छ, जहाँ निर एक पटक फेरी भविष्यको तर्फ हेर्दै, अर्को ब्रह्माण्डलाई चित्रित गर्दछ, जसमा ‘जीवनको जलको नदी’ बग्दछ, जहाँ
“त्‍यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो; जसले हरेक महिना बाह्रै किसिमका फलहरू दिइरहन्‍थ्‍यो, त्‍यसका पातहरूचाहिँ जाति-जातिहरूलाई निको पार्नका निम्‍ति थिए।” (प्रकाश 22:2)
यसरी नै, सबै जातिहरुका मानिस – जसमा तपाई पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ – दुवै मृत्यु देखि छुटकारा र जीवनको वृक्षको समृद्धि – जो कि वास्तवमा अमरत्व पाएको बरको वृक्ष हो – जसलाई अनुभव गर्न आमंत्रित गर्रिएको छ। तर पुरानो करारको ऋषि-भविष्द्वक्तहरुले हाम्रो लागि यो भविष्यद्वाणी गरेका छन कि यसको लागि सबै भन्दा पहिलो “काटने ” शर्त निर्धारित छ , जुन हामीले आगाडी हेर्नेछौ।
लेखक Ragnarप्रकाशित 29/11/2017 28/08/2020 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स जीवनको रूख जीवनको रूख हो, पूजाहारी र बाइबल पूजाहारी र बाइबलमा राजा हो, बाइबिलमा बाईबल रूखमा रूख, येशू शाखा, येशूका भविष्यवाणीहरू
पिछला पिछला पोस्ट: एक दृढ़ बर जस्तै वट सावित्री मा: शाखाको चिन्ह
अगला अगला पोस्ट: वर्णको साथ-साथ अवर्ण: यी पुरूषसबैकोलागि आउने छन्